कहिले हट्छ जडीबुटीको जाम ? - Online majdoor
कहिले हट्छ जडीबुटीको जाम ?
भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानास्थित जडीबुटी अर्थात् अरनिको राजमार्गमा हरेक दिन बिहान नौ बजेदेखि एघार बजेसम्मको जामले मानिसलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ ।
राजधानी काठमाडांै र भक्तपुरको सिमानामा रहेको जडीबुटीदेखि कोटेश्वरसम्म हरेक दिन जाम हुन्छ । हरेक दिन समयमा घरबाट खाना खाएर अफिस, विद्यालय हिंडेका सयौँ कर्मचारी र विद्यार्थी भक्तपुरको कौशलटारमा पुगेपछि निराश हुन्छन् । किनकि रेलको डिब्बाजस्तै ठूलो लाइन लागेर गाडीहरू जाम छिचोल्नलाई पालो कुरिरहेका हुन्छन् ।
त्यो लाइनबाट समयमा नै विद्यालय पुग्न हिंडेका विद्यार्थी र आफ्नो काममा हिंडेका कर्मचारी आफूले आफूलाई काम ठगेको सोच्न बाध्य हुन्छन् ।
जहाँ पच्चीसदेखि पैंतालीस मिनेटको जामले उनीहरूलाई बिताउँछ । जाम नहुँदा पाँच मिनेटमा पार हुने बाटो जामले गर्दा एक घण्टासम्म बस्नुपर्ने गाडी चालकहरू बताउँछन् । राजधानीबाट बाहिरिने यी नाकाहरूमा जाम हुने कारणले गर्दा दैनिक व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी र बिरामीहरू मारमा परिरहेका छन् । यस्तो सडकको दहनीय अवस्था भए तापनि हाम्रो देशका सरोकारवालाहरू भने कानमा तेल हाली बसिरहेका छन् । यस्तो समस्या हटाउनको लागि सडक विभाग किन चुप छ ?
– निरञ्जन दुलाल